लहानमा किन भएन सिकेको नागरिक अभिनन्दन? - नेपाल समय
लहानमा किन भएन सिकेको नागरिक अभिनन्दन?
जनकपुरधाम – स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन त्यागेर ‘जनमत पार्टी’ स्थापना गरेका सिके राउतलाई सिरहामा नागरिक अभिनन्दन गरिएको छैन्। दुई दिनसम्म सिरहाको लहानमा भएको राष्ट्रिय परिषद् बैठकपछि राउतको नागरिक अभिनन्दन गरिने प्रचारसमेत गरिएको थियो।
बिहान १० बजे लहानमा राउतको स्वागत र्‍याली र नागरिक अभिनन्दन गरिने बताइएको थियो। तर, न त नागरिक अभिनन्दन भयो न पहिला झैं र्‍यालीमा सहभागीको भिड नै देखियो।
स्थानीय एफएम रेडियो र उनका समर्थकहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत मंगलबार राउतको नागरिक अभिनन्दन गरिने कार्यक्रम रहेको भन्दै सहभागी हुन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका थिए। तर, नागरिक अभिनन्दन नभएपछि राउत केहि नबोली लहानबाट सिधा सप्तरीतर्फ लागेका थिए।
राष्ट्रिय परिषद् सम्पत्र भएको मारवाडी सेवा सदनमा राउतका समर्थकहरुले उनलाई माला लगाएका थिए। त्यसपछि समर्थकहरुका साथ राउत मोटरसाइकल र्‍यालीमा सहभागी भए। र्‍यालीले नगर परिक्रमा गरिसकेपछि राउत मधेश आन्दोलनका प्रथम सहीद रमेश महतोको शालीकमा माल्यर्पण गरे। तर, उनले सम्बोधन भने गरेनन्। विजय जुलुस नाम दिइएको र्‍यालीमा राउतका कार्यकर्ताबाहेक अन्य समर्थकहरु देखिएका थिएनन्।
यसअघि ३ असोजमा संविधान दिवसको विरोधमा तत्कालीन स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले जनकपुरमा निकालेको र्‍यालीमा हजारौंको संख्यामा उनका समर्थकहरु सहभागी भएका थिए। ठुलो संख्यामा जुटेका समर्थकहरुलाई सम्बोधन गरेका राउतले त्यतिखेर स्वतन्त्र मधेश आफूहरुको एकमात्र एजेन्डा रहेको बताएका थिए। तर, स्वतन्त्र मधेशको चर्का नारा दिँदै आएका राउत पछिल्लो समय सरकारसँग सम्झौता गरेपछि उनीप्रतिको आकर्षण घटेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
सोमबार सम्पत्र परिषद् बैठकलेसमेत जनमत पार्टी गठन भएसँगै जनमत जुटाउन जनतासमक्ष जाने र जनमतबाटै संवैधानिक रुपमा जनताका समस्या, माग, हकअधिकारका लागि अनवरत समर्पित रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। परिषद् बैठकमा मुल मुद्दा विसर्जन गरेर सरकारसँग सम्झौता गरिएको भन्दै केन्द्रीय तहका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
माथिल्लो तामाकोसी निर्माणको अन्तिम चरणमा, प...